Ara-dalàna Ny Famokarana Sy Fivarotana Zava-mahadomelina “Marijuana” Ao Orogoay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2013 21:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, русский, Deutsch, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Español
Saripika zarain'i @T13ao amin'ny Twitter .
Ny vaton'ireo mpiara-mitantana avy amin'ny elatra havia Broad Front ao amin'ny governemanta fotsiny, ary taorian'ny ora 12 niadiana hevitra lalina, nankatoavin'ny Antenimieran-doholona Orogoaiana ny tolo-dalàna izay manao ny marijuana ho ara-dalàna. Lany tamin'ny Talata 10 Desambra tamin'ny 10:38 alina ilay tolo-dalàna ho fandrindràna sy fivarotana ny marijuana.
Nametraka an'i Orogoay ho eny alohan'ny sehatra amin'ireo fampahalalam-baovao iraisam-pirenena ilay fanapahan-kevitra taorian'ilay fotoam-pivoriana nahaliana fatratra. Ankehitriny, ny didy fampiharana sisa andrasana hamoahana ilay lalàna hanan-kery. Fe-potoana efatra volana no ilaina amin'io dingana io
Eny ifotony, nitondra onjam-panehoan-kevitra sy nampisahotaka ilay fanapahan-kevitry ny parlemanta. Anivon'ireo tohan-kevitra nanohitra sy naroso tao amin'ny Antenimieran-doholona ireo fahasarotana amin'ny fiantohana izay hampifanaraka io lalàna io amin'ny zava-misy, ary ny tohan-kevitra hoe tsy misy tetikady mitombina ho amin'ny ady amin'ny fanelezana zava-mahadomelina. Mifanohitra amin'ny fomba fijerin'ny governemanta an'ity raharaha ity, nanohana ihany koa ny avy amin'ny fanoherana fa vao mainka handrisika ny fandraisana zava-mahadomelina ity lalàna ity raha ny marina.
Ireo toeram-pivarotana fanafody Orogoaiana izay hiandraikitra ny famarotana ny marijuana ho amin'ny sehatry ny fitsaboana dia tafiditra aminà fifanoheran-kevitra [es] henjana ankehitriny, izay ny sasany te-hivarotra ilay zava-mahadomelina raha ny hafa kosa indray tsy te-hanao izany
Ny Firenena Mikambana etsy andaniny, dia nahamarika fa ilay tolo-dalàna Orogoaiana hanaovana izay haha-ara-dalàna ny marijuana dia manitsakitsaka ireo fifanarahana iraisam-pirenena nosoniavin'ity firenena ity. Fanampin'izay, nampitandrina ny Fikambanan'ireo Mpitsabo Saina ao Orogoay [es] mikasika ny fiantraikan'ny fampiasàna marijuana sy ny fisongan'ny lazan'izy ety eny anivon'ny tanora. Nilaza tamin'ny gazety El País ihany koa ireo mpitsabo saina ireo fa mitàna toerana betsaka amin'ny fandaozana sekoly ny zava-mahadomelina.
Araka ny vaovao nangonin'ny Infobae [es], dia niteny i José Mujica, filohan'i Orogoay, hoe antenainy fa i Orogoay dia “hanome tànana ary hiaraka hianatra isika rehetra, satria tsy ny hametraka Orogoay hanjakàn'ny marijuana akory no hevitra nitondràna azy ity. Tsia. Tsia. Tsy izany mihitsy no fandehany. Areti-mandoza io, tahàka ny sigara ihany. Hahazo fatra voafetran'ny lalàna ianao ary raha toa ka manararaotra izany, dia horaketina ny momba anao ary homena fitsaboana.”
Manerana izao tontolo izao, sady betsaka no niandrandra no maro koa no nisalasala tamin'ilay tolo-dalàna, satria izao tontolo izao dia nanara-maso tanaty fahalinana ireo hetsika rehetra ary naneho ny ahiahiny taorian'ilay fanapahan-kevitra.
Teraka tety anaty tambajotra sosialy toy ny Twitter ny fanehoam-pijery. Ilay mpifaninana ho filoha, avy amin'ny Antokom-pirenena mpifikitra amin'ny nentin-drazana, Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga), niteny hoe :
Ho amin'ny fitoniana sy ny fahasalamana; marijuana, ho amin'ny fahalalahana; lalàna iray vaovao momba ny media. Ho amin'ny fanabeazana; tsy misy na inona na inona. Ampiasaina ho amin-java-tsy misy fotony ny maro an'isa.
Etsy andaniny, niaro ilay tolo-dalàna i @charruasomos, mpampiasa Twitter:
[Ho valin'ny bitsika nakefan'i @NicoleOrtizCh] [Lasa adala izao tontolo izao, nataon-dry zareo ao Orogoay ho ara-dalàna ny marijuana. Fa ho aiza isika ity?]
@NicoleOrtizCh Izay izany, ho ahy dia tahàka ny DINGANA GOAVANA IRAY MANKANY ALOHA izy ity ary manilika ireo mpanao aferanà zava-mahadomelina tsy ho taza-maso. Orogoay akory tsy firenena iray mpandositra ny olana misy aminy.
Ilay mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra Paragoaiana, Lucía Sapena (@LuSapena), dia nalahelo noho ny fifanjevoana iraisam-pirenena misy eo amin'ny firenena roa tonta :
Tsy maintsy manazava aho ankehitriny ho an'ireo vahiny namako telo fa Orogoay no toerana iray ivarotana amin'ny fomba ara-dalàna ny marijuana, fa tsy i Paragoay akory! Olona tsy milamin-tsaina
Ilay Venezoeliana, Yusnay Bleque (@yusnayb), dia namoaka ny eritreriny mikasika ilay tolo-dalàna:
Lasa ho ny firenena voalohany eto ambonin'ny tany manao ny marijuana ho ara-dalàna i Orogoay. Tena mahatohina tsotra izao. Tsy misaina izay fahasalamam-bahoaka mihitsy ry zareo.
Alex Freyre (@AlexFreyre) arzantina mpikatroka mafàna fo dia nampitaha ilay tolo-dalàna tamin'ny lalàna any Arzantina :
TSY HOE TSY MANKARARY ny Marijuana, noho izany dia TSY MAINTSY ASIANA FAMEPERANA. Tsy misy dikany ny lalàna 23737 manankery amin'izao fotoana ao Arzantina ary mandrisika ny fanaovana varotra zava-mahadomelina.
Nibitsika mikasika ny hetsika nanaovana ho ara-dalàna ny marijuana sy ny fifanambadian'ny olona mitovy taovam-pananahana i Rubèn Jorge Castro (@elojodelciudada):
Nanery antsika hankato ny fifanambadian'ny olona mitovy taovam-pananahana ireo vitsy an'isa, nanery antsika hankato [ny lalàna momba] [ny] marijuana ireo vitsy an'isa, ary rehefa mitranga izany, lasa verivery saina ry zalahy ary montsana ny [fanavaozana natao ho an'ny] fanabeazana. Mitovy kokoa. Mitapy kokoa.
Etsy ankilany, ao anatin'ny fanehoan-kevitr'i Luis Alberto Borsari, ny lalàna momba ny fifanambadian'ireo mitovy taovam-pananahana, ny fanaovana ho ara-dalàna ny fanalàn-jaza, ary ankehitriny, ny famokarana sy fivarotana ny marijuana dia antony mampirehareha. Ao anatin'ny bilaoginy [es] dia manoratra izy hoe :
Alaiko sary an-tsaina ireo zanatsika sy zafikelintsika mibontsin-tratra mirehareha eo ampianarana ny zava-misy ankehitriny voarakitra ao anatin'ny bokin-tantaran-dry zareo, na mihira ny hoe “Orogoay no tsara indrindra…”